Jurassic Worldဖြေ - Fallen Kingdom ကိုဒီနေ့အိမ်မှာပုံစံမျိုးနဲ့ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်
05 / 11 / 2018 07 / 11 / 2018 ဂရေဟမ် 849 Views စာ0မှတ်ချက် Jurassic World, Jurassic Worldဖြေ: Fallen Kingdom, Lego, Lego Jurassic World
Jurassic World: Fallen Kingdom သည် DVD, Blu-ray နှင့် 4K Ultra HD သို့ယနေ့တွင်ရောက်ရှိသည်။
နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အများဆုံးထွက်ရှိသည့် Jurassic franchise, Jurassic Worldဖြေ: Fallen Kingdom, ဒီဗီဒီ၊ Blu-ray နှင့် 4K Ultra HD တို့ဖြင့်ယနေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။
2015 ရဲ့နောက်ဆက်တွဲ၌တည်၏ Jurassic WorldChris Pratt ၏ Owen Grady သည် Bryce Dallas Howard's Claire Dearing နှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး သည် Isla Nubla မှဒိုင်နိုဆောများအားကယ်တင်ရန်ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင်ကျွန်း၏မီးတောင်သည်မျိုးရိုးဗီဇဖန်တီးထားသော critters များကိုသုတ်သင်ရန်နှင့်သုတ်သင်ရန်မတိုင်မီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မလုံလောက်ပါကလူကြမ်းများသည်ဘုရားသခင်အားကစားရန်နှင့်ဒိုင်နိုဆောလေလံပွဲကိုကျင်းပရန်ကြိုးပမ်းကြသည်။ သို့သော်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်တိုက်ရိုက်နမူနာများလိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့သူတို့ဟာမျိုးဗီဇအသစ်တွေကိုတီထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
Tesco ဖြစ်ပါတယ် ကွာပေးခြင်း Lego Jurassic World 30382 ကလေး Velociraptor Playpen စူပါမားကတ်ကွင်းဆက်မှာရုပ်ရှင်၏မိတ္တူကိုဝယ်သောသူတို့အား။
ဒါဟာပိုပြီးမကြာသေးမီကအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့သည် Lego Jurassic World အစုံ လာမည့်နှစ်တွင်ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ နောက်ထပ်တစ်ခု Jurassic World ထုတ်ကုန်နှင့်အတူ, 2018 မကုန်မီမျှော်လင့်ရသည် အဆိုပါ Bricktober အစုံ ကနေတဆင့်ဖြန့်ချိခံရဖို့မျှော်လင့်ထား shop.LEGO.com.
Jurassic Worldဖြေ ယခု Blu-ray နှင့် DVD များတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်. Lego Jurassic World အစုံကနေယခုရရှိနိုင်ပါသည် shop.LEGO.com.
← ထိုနေ့၏အုတ်ပုံ: Kirby ရှိ The Force Awakens
အခမဲ့ LEGO Jurassic World Tesco တွင်ရုပ်ရှင်ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ 30382 Baby Velociraptor Playpen →